ပြဿနာလေးများ. — MYSTERY ZILLION
:6::6:ကျွန်တော် တို့ အခုဆိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာလေးတွေကို အရင်ပြောပြပါ့မယ်.။။ အဲဒီ ပြဿနာလေးတွေ ဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို MZ က ကိုကို မမ. များမှ ကျေးဇူးပြု ပြီးဖြေပေး ကြပါလို့ တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်.။ စက်ကတော့ 10 လုံးထဲပါ။ server ကတော့ window 2003 ပေါ် မှာ Win Proxy ဆိုတဲ့ server ထိုင်ထားပါတယ်။စက်တွေ မှာ kaspersky antivirus 7.0 တက်ထားပါတယ်။ အခု ဖြစ်နေတာ က kaspersky ရဲ့ update ကို ဆွဲလို့ မရပါဘူး။ webpage ကနေ ၀င်ဆွဲတာကိုမရတာ ပါ.။ kasper မှ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြား ဘယ် update ဆွဲ ဆွဲ.. ဒီစာသားပဲ တက်လာ ပါတယ်။
DNS loopback fail./ This message will create Win Proxy. ဆိုပြီးတော့ ပဲ တက်လာတာ ပါ။
ပြီးတော့ www.microsoft.com ကို ဖွင့် ရင်လည်းအဲဒီအတိုင်းပဲတက်လာ ပါတယ်။ client စက်တွေကတော့ norton 9.0 နဲ့ ပွားထားတဲ့ စက်တွေပါ။ နောက်ပြီး ရှိပါသေးတယ်.. မနက်ပိုင်း စဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာ ပဲ..စက်အားလုံးက Volume Control က မရပါဘူး ဘာအသံမှ ဖွင့်လို့မရပါ။ Volume Control ကိုဖွင့်လိုက်ရင်လည်း ..ဒီတိုင်း တက်လာပါတယ။်
There are no active mixer devices available. To install mixer devices , go to Control Pannel, click Printers and Other Hardware and then click Add hardware.
ဆိုပြီး ပြပါတယ်။. အဲဒါ ကို restart ချလိုက်ရင် ပြန်ရသွားပြန်ပါတယ်။ အရင် ကတော့ တစ်ခါ ပဲ restart ချလိုက်ရင် တစ်နေကုန် ဘာမှ မဖြစ်တော့ဘူး။ အခု ကျတော့ ခဏခဏစက်သုံးနေရင် အဲဒီလိုဖြစ်ဖြစ်တော့တော့ သုံး တဲ့ သူ အတွက် အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါ ကို ကျွန်တော်က kaspersky ကြောင့်လား ဆိုပြီးူတော့ စက်တစ်လုံး ကို အစအဆုံး ၀င်းဒိုး ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ ၀င်းဒိုးတင်ပြီး network မချိတ်သေးပဲ ဒီအတိုင်း သုံးနေတာဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ kaspersky လည်း မတင်သေး ပါဘူး။ အဲ... ပြဿနာစတာ ကတော့ network ချိတ်လိုက်တာနဲ့ အပေါ်က ပြောသလို ဖြစ်ဖြစ်သွား ပါတယ် ခင်ဗျ...။ နောက်ထပ် ပြဿနာ တစ်ခု ရှိသေးတယ်ဗျ..။ တစ်ချို့ စက်တွေ က.. Network လည်းရတယ်။ server ကို ping တာရော တစ်ခြားစက်တွေ ကို ping တာ ရော အကုန်ရတယ်ဗျ...ဒါပေမယ့် Internet connection က တော့ ဘာမှ ကို၀င်လို့ မရဘူး ဗျ...အဲဒါ ကို ဘယ်လို ပြန်လုပ်မှ ရလ ဆိုတော့ အဲဒီ ဖြစ်တဲ့ စက်ရဲ့ IP address ကို ပြန်ချိန်း လိုက် မှ internet connection က ပြန်ရသွားပြန်ေ၇ာ.။ စက်တွေ က ခဏ ခဏ အဲဒီလို ဖြစ်နေတာ.... ဘာ ကြောင့် အဲဒီလိုတွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကို သိတဲ့ ကိုကို . မမ များ မှ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေး ပေး ကြပါလို့ အကူ အညီ တောင်း ခံ အပ်ပါတယ်ဗျာ.....
ကျွန်တော် ထင်တာ တော့ server ကြောင့် လို့ ထင်ထားတာ ဗျ...။ ဆာ ဗာ ကတော့ တစ်ခြား တစ်ယောက်က ထိုင်သွားတာ အဲဒီလူ က အခု ခရီးထွက်နေတော့ သူ့ ကို ပြော လို့ မရဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီ ဆာဗာ ထဲကို လည်း ကျွန်တော်တို့ ၀င် လို့ မရလို့ပါ။ password လည်းပြော မထား ခဲ့လို့ ပါဗျာ...
DNS ကတခြား site တွေကိုရနေတယ်။ microsoft / avg / malwarebytes / norton အဲလို site မျိုးတွေပဲမရတာလား ခင်ဗျာ။ ဒါဆို DNS error မဟုတ်ပါဘူး။ Bootup လုပ်ပြီး2နာရီလောက်ဆိုဖြစ်လိုက် reboot လုပ်လိုက်ဖြစ်နေတာလား ? ပုံဆံနဲနဲကွဲပေမယ့် ဒီကောင်လို့ပဲထင်ပါတယ်။ ဒီမှာတချက်ကြည့်ပြီး ကျနော့ post က link ကနေ MS08-067 လေး download လုတ်လိုက်ပါ။
virus ကတော့ kill ရအုန်းမယ်ဗျ။ Kaspersky manual update လုတ်ကြည့်ပါလား။ မလုပ်တတ်ရင် Windows ကို Safe Mode with networking နဲ့တက်ပြီး Update ရင်လဲရပါတယ်။ အဲဒီကနေ Virus အရင် kill ကြည့်ပါ။ ပြီးမှ patch install လုတ်ပြီး restart ချလိုက်။
အကိုရေ... အခုလိုပြောပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...
အကိုရေ.. virus ကတော့ kasper update ကို တခြား ဆိုင်က နေသွားသွား ဆွဲ ပြီးတော့ munual update လုပ်ထား ပြီးတော့ scan ကို လည်း နေ့ တိုင်း စစ်ပါတယ်.။ တွေ့တဲ့ ကောင်တွေ ကိုလည်း သတ်သတ် ပြစ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ... အဲဒီ anitvirus update ဆိုဒ်တွေ အကုန်လုံးပဲ ဗျ.. ၀င်လိုက်ရင် အဲဒီလို ဘဲ စာတမ်းတက်တာ လာ.. နောက်ပြီးတစ်ခု ရှိသေးတယ်.. www.myanmar.mmtimes.com ကို ၀င်ရင်လည်း အဲဒီလိုပဲ DNS loopback Fail ဆိုပြီးတက်လာ တာ ပဲ ဗျ.။..
ကျွန်တော်လည်း တစ်ခြား အင်တာနက်ဆိုင် နှစ်ဆိုင်မှာ လည်း client စက် အလုံး 40 တာ၀န်ယူထားပါတယ်။ အဲဒီ လိုပဲ kaspersky ကို ကီးအတွက် path file နဲ့ အသုံးပြုထားပါတယ်။ အဲဒီဆိုင်တွေက ဆာဗာ က Linux Free BSD နဲ့ ထို်င်ထားတဲ့စက်တွေ ပါ။ အဲဒီ စက် အများ ကြီး က ဘာ ပြဿနာမှ မရှိပါဘူး အား လုံး အဆင်ပြေပါတယ်။ update လည်း auto ပေးထား တာ အကုန်လုံး အဆင်နေပြီးတော့ ... အခု ဆိုင် ကျမှ ဆာ ဗာ ကွာ သွားတာ ရယ် ..စက်တွေ က ဆိုင်က တင်ပေးလိုက်တဲ့ ကလုံး လုပ်ထားတာ တွေ ရယ် ဆိုတော့ ပြဿ နာ တွေ က တစ်မျိုး ပြီး တစ်မျိုး တက်နေတယ် ဗျာ... နောက်ပြီး ...Volume Control အကြောင်း လေး လည်း ပြောပေးကြပါအုံးနော်..
အစ်ကို.. တို ့ရေ.. ကျွန်တော်လဲ... zawtk လိုပဲ ... vloume control ပြသာနာ တတ်နေပါတယ်... သိတဲ ့ကိုကို... မမ များ..ဆွေးနွေးပေးပါအုံး....
services ထဲမှာ DNS client ဆိုတာလေးရှိတယ်ဗျ။ Stop လုပ်ပြီးဝင်ကြည့်။
ကျနော်ပြောထားတလို အဲ virus ကဝင်ဖူးရင်ကို အဲလိုတွေဖြစ်တာ။ ရှိနေမှမဟုတ်ဖူးဗျ။ Antivirus site တွေ microsoft update တွေအကုန်လုံးကို DNS error ပြတယ်ဗျ။
အကိုရေ.. အခုလိုပြောပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ... ကျွန်တော် အကိုပြောသလိုလုပ်ကြည့်တယ်ဗျ.. ဒါပေမယ့် အဲဒီဆိုဒ်တွေက ၀င်လို့ မရဘူးဗျ.. အဲဒါ က သိပ် အရေးမကြီးပါဘူးဗျာ.. တစ်ခြားဆိုင်က နေ update ဆွဲပြီးတော့ scan စစ်လို့ ရတယ်ခင်ဗျ။ အခု အရေး ကြီးတာက သုံးနေရင်း နဲ့ Network ကရှိတယ်...Ping လည်း ရတယ်..server ရော တစ်ခြားစက်တွေ ကိုရော Ping တာ အကုန်ရနေတယ်။ ဘာကြောင့် အင်တာနက်ကော်နက်ရှင် မရတာလဲ မသိဘူးဗျာ... အဲဒီလိုဖြစ်ရင် IP address ပြန်ချိန်းပေးရင်တော့ ရသွားပြန်တယ်ဗျ. အဲဒီလိုတွေ ခဏခဏဖြစ်နေတယ်ဗျ။ အဲဒါ ဘာကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ... မော်မော် မင်မင်.. တို့ က နေဖြေပေး ကြပါအုံးနော်.............:77::77:
တုူတူပဲ အဲလိုပဲဖြစ်တယ်ရှင့် ပြီးရင် task bar ကိုကော သတိထားမိလားမသိဘူး အဲဒါပါဖြစ်တယ်နော်
တိတိကျကျပြောရင် connection တွေနှေးပြီး ပြန်ရတယ်ဆိုမှ ဖြစ်တာပါ kaspersky တင်ထားတဲ့
စက်တွေကျတော့လည်း ဒီလိုဖြစ်ပြန်တယ်ရှင့် port 445 ကနေ virus ၀င်တယ်ဆိုပြီး အဲစက်နဲ့local ချိတ်ထားတာတွေကို block လိုက်ပါတယ် share လိုလည်းမရတော့ဘူး volume ကလဲအဲတိုင်းပဲ လုံး၀ကိုပျောက်တာ deep freeze သုံးပါတယ်ရှင်မသင်္ကာလို့ windows ပြန်တင်ပြီးလုပ်လဲအဲအတိုင်းပဲ သူငယ်ချင်းတွေရောအကုန်နီးနီးဖြစ်နေတာပါ ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး ဖြေရှင်းလို့ရရင်တော့ ဖြေရှင်းချင်ပါတယ်...သိရင်ပြောပြေးကြပါရှင်
yonnnadi wrote: »
yonnadi က ဘာဆာဗာ သုံးထားလဲ မသိဘူးနော်.. ကျွန်တော်တို့ကတော့ WinRoute ဆာဗာ ကိုသုံးထားပါတယ်.။ အဲဒီဆာဗာက သိပ် အဆင်မပြေတာတွေများတယ်လို့ ကြားပါတယ်...တခြားဆိုင်မှာ.. linux free bsd ဆာဗာနဲ့ သုံးထားတာ ဘာမှ ပြဿနာမရှိပါဘူး အဆင်ပြေပါတယ်.။ စက်တွေလည်း အများကြီးသုံးထားပါတယ်.။
အမ က kasper ကိုသုံးထားရင် အဲဒီ kasper ရဲ့ setting ကနေ Traffic monitoring ကိုသွားပြီးတော့ Port Setting ထဲကို၀င်ပြီးတော့ Monitor select port only ဆိုတဲ့ အောက်က တစ်တွေကို ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ... အဲဒါ က အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်..။
သူ့ရဲ့ behavior က ၁ - ၃ နာရီမှာတခါဖြစ်ပါတယ်။ Restart လုတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် IP address change ရင်ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ရပါတယ်။ Event Log ထဲသွားကြည့်ရင် Application error log မှာ error pair တစ်ခုကို ထက်ခါထက်ခါ မြင်ပါလိမ့်မယ်။ Services.msc မှာသွားကြည့်ရင် Server service ဟာ stop ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ Ping ရတယ် တခြားဘာ network services မှမရတော့ဘူး။
ကျနော်ပြောတလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကျနော်ပြောတဲ့ hotfix လေးရော install မလုပ်ကြည့်ဖူးလားဗျာ။
conficker worm ရဲ့လက္ခဏာ တွေ နဲ့ တော်တော်လေး ဆင်တူပါတယ်။ အောက်က conficker removal tool လေးနဲ့ စမ်းကြည့်ပါလား။
:6::6:အကိုရေ.. အကိုပြောတဲ့ hotfix လေးကိုလည်း install လုပ်ပြီး စမ်း ကြည့်ပြီးပါပြီဗျာ.. မရဘူးဗျ။ ကော်နက်ရှင်တွေ ခဏခဏ ပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဗျ.. အခု ပိုပို ဆိုးလာတယ်.။ ပြီးတော့ ဗျာ.. လိုင်းက 512 တောင်ယူထားတာဗျ..ကော်နက်ရှင်က 128 လောက်တောင် မကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။ တစ်ခြားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောတာတော့ WinRout Proxy Server ကြောင့် လို့ ပြောပါတယ်ဗျာ.. အဲဒါ ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် တော့ ဆာဗာ ပြောင်းထိုင်ရအောင်လို့ အကြံ ပေးကြပါအုံးဗျာ.. ဆာဗာ ကြောင့် ဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်း ဆွေးနွေး ပေး ကြပါအုံးခင်ဗျ... ပြီးတော့ အဲဒီ ဆာဗာ အကြောင်းကိုလည်း သိချင်ပါတယ်.. ၀င်ရောက်ဆွေးနွေး ပေး ကြပါအုံး ခင်ဗျာ...:77::77:
Client အချင်းချင်းရော network ရလားဗျ။ Client အချင်းချင်း remote desktop တို့ network share တို့ရောရလားဗျ။ မရရင်တော့ Server နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဗျ။ Internet ပဲမရတာဆိုရင်တော့ ဟုတ်မယ်။
အဲလိုဖြစ်ရင် 1 လုံးချင်းဖြစ်လား Client အားလုံးတပြိုင်ထဲမှာဖြစ်တတ်လားဗျာ။ Server ကြောင့်ဆိုရင် အားလုံး တပြိုင်ထဲဖြစ်ရပါမယ်။ 1 လုံးချင်းဖြစ်တာဆိုရင် Event Viewer ထဲမှာ error နဲနဲ ကြည့်ကြည့်ပါလား။ အဲဒီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Error ပြလားလို့။
အကိုရေ.. client အချင်းချင်းတော့ network ရတယ်ဗျ။ စက်တွေ ဖြစ်တာ လဲ.. အားလုံး တစ်ပြိုင်ထည်း ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူးဗျ..၂ လုံး ၃လုံးလောက်ဖြစ်လိုက်..အဲဒီစက်တွေကို IP ချိန်းလိုက် ကောင်းသွားလိုက် ... ခဏနေ တခြားစက်တစ်လုံးက ဖြစ်လိုက်နဲ့ ဗျ..ပြီူးတော့ စောစောက IP ချိန်းလိုက်တဲံ့ စက်က ပြန်ဖြစ်လိုက်နဲ့ ဖြစ်နေတာဗျ.. ကျွန်တော် တော့် မကြုံဘူး လို့ ဘာလုပ်ရမှန်း ကို မသိပါဘူးဗျာ..အကိုပြောတဲံ့ Event Viewer က ဘယ်လို၀င်ကြည့်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပေးပါအုံး ဗျာ.. ကျွန်တော် က ဘာမှ ကောင်းကောင်း မသိသေးလို့ပါ.. ကျေးဇူး လည်း တင်ပါတယ်ဗျာ..
ဘာ server မှမသုံးပါဘူးရှင် စက်လေး ၄ လုံး ၅လုံးလောက်ကို roughter နဲ့ local ချိတ်ထားတာပါ
အလုပ်ကျတော့ သူ့အပိုင်းနဲ့သူပေါ့နော် တစ်ယောက်ပြီးရင် share ထဲထည့် တစ်ယောက်ဆက်လုပ်ပေါ့
အဲလိုဖြစ်ပြီဆိုအကုန်တော့မဖြစ်ဘူးရှင့် ဖြစ်တဲ့ဟာမှ ဖြစ်တာ local ခေါ်မရတော့ဘူးဆိုရင် restart ချရတာပဲ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း sound ကပျောက်ပျောက်နေလို့ သီချင်းတောင်ဖွင့်မရဘူးရှင့်
fun.exe ကိုသတ်တဲ့ software ပေါ့ပေါ့ပါးပါး များမရှိကြဘူးလားရှင် ခုတော့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး kaspersky ကို exit ပြီးသုံးနေရတာပဲ ကူညီနိုင်ရင် ကူညီပါဦးရှင်:77:
ကျွန်တော်ကတော့ အပေါ်မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာက conficker ရဲ့ အစွမး်ပြချက်တွေလို့ ထင်ပါတယ်။
conficker ကလည်း အခုလိုပဲ windows audio service ကို ပိတ်ပစ်တတ်ပါတယ်။ တခြား network နဲ့ပတ်သက်တဲ့ service တွေကိုလည်းတော်တော်များများ ပိတ်ပစ်ပါတယ်။ network shared တွွေထဲကနေ ကူးစက်ပြီး ၊ ကူးစက်မှုကလည်း အရမ်းမြန်ပါတယ်။ audio service ကို ပိတ်လိုက်လို့ ပြန်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ my computer (right click)-->manage-->Services and Application-->Services ထဲမှာ
Windows Audio ကို right click လုပ်ပြီးတော့ service ကို start ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးတော့မှ conficker အဓိက ၀င်နေတဲ့စက်ကို ရှာပြီးတော့ သတ်လိုက်ပါ ။ (conficker removal tools) ကို အရှေ့ post မှာ ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။
avari antivirus က worm တော်တော်များများ ကိုနိုင်ပါတယ် အဲတစခုရှိတာက ကို့မှာရှိတဲ့ freegate.exe Ultrasurf.exe တွေကိုပါ ဆောိလိမ့်မနော်.... အဲ့တော့ ကို့ဆီက သူမဖျက်စေချင်တဲ့ exe နဲ့သုံးတဲ့ဟာတွေကိုအရင် သိမ်းထားပါ.. ပြီးရင်တင်ပြီးတော့သာဆော်တော့ဗျာ fun.exe ရောသူ့သားပေါက်တွေပါအကုန်သမလိမ့်မယ်... NOD လဲ fun.exe ကိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ.. ဒါပေမဲ့ folder ထဲမှာပွားနေတာတွေ ကိုတော့ folder ဖွင့်လိုက်မှသူတွေ့့ပြီးသတ်ပါတယ်... ကြိုက်ရာသုံးပေါ့ဗျာ... avari antivirus လိုချင်ရင်တော့ဒီမှာ ယူပါဗျာ...
symbolbeta wrote: »
အဲဒါလေး down မရလို့ mediafire ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကနေ ပြန်တင်ပေးပါလားရှင်
Conficker removal tool - mediafire
Go to Start --> Run, and type in services.msc
အဲဒီထဲက windows audio ကိုရွေး right click -> Properties
startup type ကို automatic ထားလိုက်
service status ကိုလည်း start လုပ်ခဲ့ဦးဗျ..
google မှာ ရှာကြည့်တာ အဲလိုတော့ပြောတာပဲ စမ်းကြည့်ဗျ..